Biputere smartphone mgbanwe, ịzụ Android ngwa ka dị nnọọ ibu a dum otutu mfe. Mgbe azụ bụ banyere music, anyị na-Android ngwa ọdịnala na gam akporo igwe nnọọ kemfe.
6. Nhazi ụda
9. Rọketi Player
Download free music na TunesGo
Top10 Android apps ịzụta music:
A na ngwa bụ presumably ndị kasị mma Android ngwa ịzụ ihe music online na nnọọ ewu ewu n'etiti ya ọrụ.
Ịzụ music na DoubleTwist:
The ngwa nwere zuru album ndepụta ahụ ga-abụ anya na aka-ekpe-n'akụkụ gị Android ihuenyo. Họrọ n'etiti nhọrọ dị ka Albums na Artists na mgbe ahụ gaba ibudata song / s on zụọ.
Uru: Na nke a ngwa ị nwere ike seamlessly mekọrịta music n'etiti iTunes na Android. Ọ nwere 5-kpakpando fim na nwere obosara ime mgbanwe dị iche iche audio formats.
Cons: The isi ngwa bụ n'efu; ma arụmọrụ zuru oke nke ngwa na-abịa na ya zụrụ version.
★★★★★ Easily ndị kasị mma na-achọ music ọkpụkpọ na android.
★★★★★ Nke a bụ nnọọ mma karịa "wuru na-" music ọkpụkpọ na wee na ekwentị m.
★★★★★ Gịnị mere m otụhọde Google Music ruo ogologo oge bụ ihe karịrị m. A n'anya ngwa. Great mwekota na iTunes. Na-elu ọrụ ọma ahụ.
Anyị Nchoputa ọ bụ nke abụọ kasị mma Android ngwa n'ihi na ịzụ music.
Ịzụ music na Poweramp:
The ngwa nwere zuru ezu albums nri na aka ekpe n'akụkụ na gị Android ihuenyo na miniature foto. Họrọ onye na-amasị gị na-eso nzọụkwụ depụtara n'ebe a ọrụ enyi na enyi ụzọ.
The ngwa awade zuru ezu mgbanwe na okwu nke isiokwu na a ụyọkọ Tweaks on ntọala.
The ngwa awade 15days FREE ikpe na arụmọrụ zuru oke post nke ị nwere ịzụta ya.
*** Biko adịghị agbalị imelite ma ọ bụrụ na ị zụrụ Unlocker on Poweramp saịtị, dị ka Google Play Unlocker abụghị otu. Nọgide nnọọ na-gị ugbu a Unlocker dị ka bụ.
Mkpa ọrụ nwere iju oké ókè-ala gburugburu album artwork, zooming size adịghị aka na nhazi ụda na ụda buttons nọ nso-agaghị ekwe omume ịhụ ka ihe karịrị ìhè acha artwork. Maa kwesịrị a bit ọzọ ọrụ, nwere ike ịbụ mma, ma, dị ka ọ bụ, ya a bit imetosi!
Woobie na-arụ ọrụ ruo mgbe na-adịbeghị anya updateGreat akpụkpọ ma na-adịbeghị anya update m nwere ike agaghịkwa eji ya. M na na na Sony Xperia Sp, android 4.4.
Ọ bụ otu n'ime ndị na-ekpo ọkụ ọkacha mmasị n'etiti music hụrụ na ya n'ọtụtụ ebe na-eji ndị mmadụ gburugburu ụwa.
Ịzụ music na Google Play Music:
On aka ekpe n'akụkụ gị Android ihuenyo i nwere ike ịhụ nhọrọ dị ka Listen Ugbu a, My Library ghota na ịhọrọ site na dị ka kwa gị likings. Soro mfe nzọụkwụ depụtara na a nnọọ ọrụ enyi na enyi n'ụzọ.
The ngwa abịa FREE na bụla Android ekwentị na awade a nnukwu ígwé ojii n'ọbá akwụkwọ.
N'adịghị ka Poweramp a na ngwa adịghị enye ukwuu mgbanwe maka customization nke ntọala na themes.
Andrea Ụlọ Nzukọ
Biko idozi! M na agụụ ike ngwa ebe ọ bụ na m na malitere iji na-akparaghị ókè ohere na gwara ọtụtụ ndị enyi banyere ya. Ma na a nnukwu ma m nwere ike agaghịkwa download music. Biko idozi !! Apụghị m ịhụ onwe m na-akwụ ụgwọ ọzọ ọnwa mgbe m nwere ike ghara inwe ọhụrụ music. Nke a bụ nanị ngwa ka m n'ezie na-akwụ ụgwọ maka.
ọ bụghị mgbe nile na-arụ ọrụ na-egwu m ebudatara ma ọ bụ streamable redio. * ọhụrụ version: ka na-enwe nsogbu mgbe ụfọdụ. Naa na mmelite ọhụrụ ma ka mgbe ụfọdụ mbipụta. Ịkagbu mgbe m $ 3 n'ihi na ọnwa 3 ndibiat expires. M gaara a subscriber ma ọ bụrụ na-erughị mfịna
Gapless play ida Spotify eme gapless play na ekwentị m, ha na-eji ngwa bụ nke ukwuu karịa obi ụtọ iji. N'ihi ya, m na-ịmafe. Google e gwara banyere nke na gapless play ruo ọtụtụ afọ. Ha adịghị ka na-elekọta.
Ọfọn ok-amasị m nke a ọkpụkpọ music ma m ana ego na a play ụlọ ahịa onyinye kaadị na mgbe m nwara ịzụta na-akparaghị ókè music ngwa nye m njehie m na purichase na kaadị na-ekwu n'ụzọ doro anya na "M nwere ike ịkwụ ụgwọ subcriptions nke google ịkpọọ egwu na ozi ọma ma ọ bụghị ndị ọzọ subcription ": c (ma na kaadị N'ikpeazụ, m ịzụta ụfọdụ egwuregwu na ọrụ)
A na ngwa na-eme agba n'ihi na ezi oge ụfọdụ na ahịa.
N'okpuru taabụ Album họrọ onye na-amasị gị na-eso nzọụkwụ depụtara n'ebe a ọrụ enyi na enyi ụzọ.
Uru: The ngwa na-abịa na a sọrọ enye nke ọdịyo na video Player na otutu chọsiri ike inweta atụmatụ dị ka anụ nkwado na 10 gbalaga graphic equalizer.
Cons: The ngwa dị na zụọ. Trial version adịghị nwere niile àgwà.
AlbumArtist adịghị arụ ọrụ afọ ole na ole ugbu a .... Nke a ọkpụkpọ nwere otu nke kasị mma UI m na mgbe hụrụ na ihe ọ bụla music ọkpụkpọ maka android !! Otú ọ dị, albumartist ọrụ (eji "albumartist" mkpado kama nke "na-ese" mkpado ke "Artists" anya) adịghị arụ ọrụ mgbe nile (ọ bụ ezie na ọ bụ na ntọala peeji nke ngwa !!!!), na mmepe ndidi otú incommunicado na nke a nke .... N'ihi na afọ !!! (lee ha nkwado Forum) Google Play Music eme ya n'ụzọ ziri ezi, nakwa dị ka GoneMad. M na-ga-azụta zuru version ma ọ bụrụ na mgbe ha ga-idozi nke a ahụhụ, ma ugbu a, nke a bụ bụghị ikpe.
SUX IBE Bs APP. Iji nweta ike gị akwụ emeghị kụrụ m ụda ,, AT-nile !! Iwepu
Awesome Great n'ihi ihe ọ bụ. Rụrụ magburu onwe na ebe niile. Ga-amasị ndị ọzọ Hi-Fi ntọala na nhọrọ ịhọrọ agba isiokwu. Ga-amasị setịpụrụ ihe song Ama na bụ anya mgbe niile otú ahụ ka m mara samplerate na-enweghị ịbanye menu maka onye ọ bụla egwu. M ga-ahụ n'anya a treble isi aswell. Beyond ndị nnọọ obere "cons" ọ bụ ihe kasị mma audio ọkpụkpọ na ahịa. A graphic visualizer ga-ụtọ aswell = p. A EZI masterpiece
Anyị Nchoputa, Shuttle Music Player ngwa bụ nke ise kasị mma ngwa n'ihi na music zuo online.
Ịzụ music na Shuttle Music Player:
The ngwa dị nnọọ mfe ma ọrụ enyi na enyi. Were a anya na screenshot ebe ị ga-ahụ nhọrọ dị ka-adịbeghị anya, Artists, Albums na Songs. Pịa na kwesịrị ekwesị taabụ gị oke na mgbe ahụ, na-eso mfe nzọụkwụ depụtara n'ebe ahụ.
Uru: The ngwa nwere ụra ngụ oge, wuru na-equalizer na mgbanwe ole na ole gburugburu n'akụkụ Iweputa music.
Jonathan Valle fọrọ nke nta zuru okè! Ihe niile banyere banyere nke a ngwa bụ ịtụnanya! E nwere ihe dị nnọọ otu ihe. Na albums ngalaba m kweere na ọ na-dabeere na album mkpado ma i nwere ike biko ịdabe ya na album artist mkpado? N'ihi na ọ na-egosi ọtụtụ n'ime otu ọgụ egwu ihe atụ Ariana Grande na ọzọ ngalaba Ariana Grande feat. The izu ụka na ọ nwere ike ịhụ a cover image n'ihi na. Ọ ga-adị mma n'ihi na ọ bụla Ariana Grande songs gụnyere ndị featuring ndị ọzọ ga-gụnyere niile n'ime onye na-ese ngalaba!
Ọ bụ oké music ọkpụkpọ Ọ bụ oké ngwa na-amasị m nhọrọ. Naanị ihe ga-amasị m nwere bụ nhọrọ nke a wijetị na Ihuenyo nke ekwentị m ebe m nwere ike ịgbanwe songs kama Anam Udeme na ngosi panel ịgbanwe ya. Ọ bụrụ na nhọrọ nọ n'ebe ahụ, ga-abụ a 5 kpakpando ngwa
Anwụ na-acha Wu-arụ ọrụ n'ụzọ dị mma karịa Google si I0 ahụghị ihe Eq nhọrọ, ma nke a na-arụ ọrụ n'ụzọ dị mma karịa Google si Music Player. Ọ dịghị ihe ọzọ nwere ike ugbu a hazie m listi ọkpụkpọ site na ọkụ egwu aha ma ọ bụ keabiidii iji na m nwere ike ihichapụ imekwa mbipụta nke music nri ke ngwa!
6) nhazi ụda:
Nke a ngwa ezigbo wuru na-nhazi ụda na maximizes mmepụta effortlessly.
Ịzụ music na nhazi ụda:
Were a anya na screenshot n'elu. Ọ yiri egosi a ọgbaghara. Ma, i n'ụzọ doro anya si na taabụ otu mgbe ọzọ. Pịa na taabụ albums ihe atụ na mgbe ahụ na-eso nzọụkwụ dị ka ga-kpaliri maka ịzụ music online.
Uru: Na ngwa na-mara mma nke ukwuu adored site music hụrụ anya nke ya wuru na-ezigbo equalizer.
Cons: N'adịghị ka ụfọdụ n'ime ya ụzọ, ngwa adịghị abịa free na ya zuru functionalities.
Good ma, enweghị ike ịgbanwe ntọala.
biaghachi Mgbanwe Mgbe m ịgbanwe equalizer, mechie ngwa na-emeghe ọzọ, nhazi ụda na mgbe nile-aghọ omenala .. m kpọrọ asị ya mgbe m na-emeghe na ngwa ma ịgbanwe ntọala ọzọ .. mere ya agaghị azọpụta?
Ọ bụ otu n'ime ndị a kasị mara amara na gosiri music ọkpụkpọ ngwa.
Ịzụ music na neutron Music Player:
Taabụ o doro anya na egosipụta ebe a na n'akụkụ aka nri nke gị Android ihuenyo. Na-amalite na Albums na soro ntuziaka n'ebe ahụ.
Uru: Ọ nwere 32 - 64 ibe n'ibe music nsụgharị n'akụkụ nyopụta ọnụnụ na nhazi owuwu na ime mgbanwe a ọnụ ọgụgụ nke formats.
Cons: Ọ bụ ụgwọ ngwa.
dị mma, mgbe ọ na-arụ ọrụ Chọpụta, ọ na-ada ukwuu. Nwa oge. Mgbe ahụ, ọ mkpọka. Ma ọ bụ kpebie "echefu" m netwọk music n'ọbá akwụkwọ otú ahụ ka m ga-rescan dum ihe, nke m na nọrọ m ntụrụndụ oge-agbalị ime ka a usoro ọrụ. M na-aga azụ DS Audio. Ọ dị ya nnọọ na-arụ ọrụ.
A kwesịrị music ọkpụkpọ maka ego. Ihe dị ịtụnanya ngwa. Truely a ịkpụ n'elu ihe kasị mma e nwere. M nwere iPhone 4 bụ ihe ọma na ọ bụ aka nri, ma nke a karịrị ọ bụla music ọkpụkpọ m mgbe eji. ka eme mgbanwe ona m mmasị, nke a bụ amamiihe Jiri ya kwa ụbọchị. 2015 ka na-eji dị ka naanị ọkpụkpọ m tụkwasịrị obi. Nanị na 4 kemeghi parameters ma na n'ọtụtụ ebe, customizable na ala ụdịdị dị iche iche ọnụ ọgụgụ. N'ihi ya, anya na-arụ ọ bụla audio algọridim ive eji. Ọ dịghị ihe karịrị nke a n'ihi na ezi audio ụtọ.
Elu àgwà ụda, mgbe 20 na-abaghị uru Player mechara hụ otu Sound àgwà a chọpụtara, nwere ike enuba ọ bụla na ngwaọrụ gụnyere xbmc / kodi. Amalite music anya dị ka m na-amalite m ụgbọala na Bluetooth jikọọ. Naanị beef bụ n'ebe na-adịghị ka ịbụ onye na-mkpụrụ okwu na akwụkwọ mpịakọta. Ma tụnyere ndị fọdụrụ, ya kacha mma. -Agba ọsọ na cyanogen mod 12.
Ọ bụ dịtụ ọhụrụ entrant na music ngwa ahịa na a pụrụ iche interface.
The ngwa bụ nnọọ ọrụ enyi na enyi. The taabụ o doro anya na egosipụta na gị Android ihuenyo.
Uru: Awesome ọrụ interface na 3D ụda mmetụta, mkpado editọ, ụra ngụ oge na a otutu ihe atụmatụ.
Cons: Ọ bụ ụgwọ ngwa; ma awade 10 ụbọchị ikpe oge na zuru atụmatụ.
Gịnị mere ?! Na m nwere unlocked version na-emekarị na-eji ngwa bụ n'ezie ezi banyere ikwe ka m gbanwee mkpado otú m nwere ike hazie m music Ma n'ihi ihe ụfọdụ, ọ dị nnọọ ga-arụ ọrụ, otu na album mkpuchite, m ike ịgbanwe ha. M dị tinye a ụyọkọ ọhụrụ music na ekwentị m na m Library bụ a ọgbaghara. M na gbalịrị-aga n'ime ọbá akwụkwọ ntọala na-agbanwe agbanwe otú ihe na-ota ma ọ dịghị ihe o yiri ka na-arụ ọrụ. Biko nyere ma ọ bụ melite ma ọ bụ ihe mere m nwere ike inye gị ụmụ okorobịa na 5 kpakpando fim azụ!
Ji ga-mma Oke ọtụtụ nsogbu na ole na ole gara mmelite. Album nkà kpamkpam mgbe ekwentị na rebooted na a ga-ebudatara ọzọ. Player Freezes nnọọ a bit. Ọ dịghị tech supprt. Zitere a ozi ha ma ọ dịghị nzaghachi. A na-eji ụgwọ mbipute na ngwaahịa LG G3 ma ga-ehichapụ na-eji a dị iche iche ọkpụkpọ.
bụ ihe ọma. Biko fix. Na ọhụrụ version, m songs ga-akpọ ihe a nkeji ma ọ bụ abụọ na mberede kwụsị. M kụrụ egwu ọzọ na ọ na-aga n'ihu ebe ọ hapụrụ. Eme mara mma anọgide ugbu a. Gịnị bụ ọkacha mmasị m music ọkpụkpọ na m Cheta 4 bụ ugbu a unusable. Biko fix.
N'ihi na nke ụfọdụ oké atụmatụ, a na ngwa bụ a na-ewu ewu otu on Android.
The ngwa bụ nnọọ ọrụ enyi na enyi. Taabụ o doro anya na egosipụta na gị Android ihuenyo maka imechi a zụọ.
Uru: Ọ nwere oké codec nkwado na mgbanwe na-a nso nke music formats.
Cons: The interface anya a bit cluttered.
Unu Ịzụta Full Version Ha bụ nnọọ Come n'ụzọ ha na-enyere ndị ahịa ha. Emelitere na ugbu a, m furu efu m niile album na nkà na mgbe m na-agbalị image search ha chọrọ ka m akwụ ụgwọ ọzọ kwa afọ maka a atụmatụ m ama ugwo maka mgbe m zụrụ zuru version. O yiri ka ha na-tricking gị ịzụ zuru version na-edepụta na-akparaghị ókè album na nkà na mgbe ahụ na-ewere ya na ugbu a, m na-enwe weere. M ugwo maka ihe ọ bụla n'ihi na ọ bụ ihe niile ha na-awa maka zuru version. Ya mere, ihe mere m kwụọ ụgwọ maka? Ha bụ ndị obi tara mmiri
Great ma e wezụga obere nkọwa gaara enye 5 Ọ bụrụ na music wouldnt kwụsị n'ihi na ọkara a abụọ n'etiti songs na mgbe m na-agbalị ikwu ka a ụfọdụ akụkụ nke a abụ na ọ "lags" n'ihi na ọkara a abụọ ọzọ, ndị ọzọ karịa na cant iyi ịchọta ọ bụla nsogbu ndị ọzọ! ************************************* edit: ekele ha tech support jisiri idozi obere mbipụta , 5 kpakpando!
Kpọọnụ ọhụrụ version! Gịnị mere ha ọgbaghara na oké ngwa? Na ọhụrụ version, na darn ihe ka na-agba ọsọ na ndabere ọbụna mgbe a na-aka emechi. M mere ọ dịghị mgbanwe m listi ọkpụkpọ Ma ha nile okụrede na mmegolite. Isyncr site na eriri agaghịkwa na-arụ ọrụ. Chọpụta ya bụrụ na ọ na-akpaghị aka emelitere. Old version enweghị mbipụta
FlipBeats Music Player a na-ahịa dị ka ọgbọ ọhụrụ music ngwa.
Ka ị na-ahụ na ihuenyo ogbugba, na mkpa na taabụ na-egosipụta na gị Android ihuenyo maka imechi a zụọ.
Uru: Ọ nwere oké multi gbalaga graphic equalizer na mara mma interface.
★★★★★ www.LifeHacker.com - "FlipBeats Bụ a ezi na-achọ, Ogbugbu kwadoro Music Player maka gam akporo"
★★★★★ www.AndroidGuys.com - "FlipBeats, na-kasị nke gị music"
★★★ ★★ www.Engadget.com - "FlipBeats: nkwafu music ọkpụkpọ ngwa n'ihi na gam akporo"
Mma Life na Best 5 Android Paswọdu Manager
> Resource> Android> Olee Zụrụ Music on Android na Android égwu?